सावधान! कतै तपाईंले गलत रत्नहरु त लगाउनुभएको छैन ? | Mero Jyotish
सावधान! कतै तपाईंले गलत रत्नहरु त लगाउनुभएको छैन ?
हामीले समाजमा एउटै व्यक्तिले हातमा तीन चारवटा रत्न धारण गरेको देख्छौं । त्यति धेरै रत्न लगाउँदा पनि तिनले आफ्नो इच्छाअनुसार सफलताको पाउँनुको सट्टा उल्टै असफलता नै हात लाग्छ । जुन प्रकारले ग्रहको आपसमा शत्रुता वा मित्रता हुन्छ, त्यसै प्रकारले सम्वन्धित ग्रहको रत्न पनि आपसमा शत्रु र मित्र हुन्छन ।
जब हामी शत्रु र मित्र प्रकारका दुई रत्न धारण गर्छौ, त्यसले एक अर्कोको शुभ प्रभावलाई समाप्त पारि दिन्छ । र, हामीलाई कुपित ग्रहको अत्याधिक दुष्प्रभाव भोग्नु पर्छ । अतः रत्न धारण गर्नु अगाडि ती रत्न एक आपसमा मित्र वा शत्रु हो त्यसको पहिचान गर्नपर्छ । यदी पहिचान नगरि धारण गरेका रत्न मित्र भए त ठिकै छ, तर शत्रु भएमा दुर्भाग्य भोग्नु पर्छ । हामीले कुन कुन रत्नको साथ कुन कुन रत्न धारण गर्न मिल्छ र कुन कुन रत्न साथै लगाउँन मिल्दैन त्यसको विवरण यस प्रकार छ ।
माणिक्यः माणिक्य सूर्यको रत्न हो । सूर्य कुण्डलीमा शुभ भावको स्वामी भएमा जातकका लागी शुभ फलदायक हुन्छ । साथै माणिक्य धारण गर्दा स्वा पाँच रत्तिको हुनुको साथै शुद्द पनि हुनु पर्छ । माणिक्य धारण गर्दा नीलम, गोमेद, र हीरा कहिल्यै धारण गर्नु हुदैन भन्ने सदैव ध्यान दिनु पर्छ । यी माणिक्यको शत्रु हो र यी धारण गर्दा हानी गर्छ । यदी माणिक्यसंग त्यसको मित्र रत्न मँ’गा, पुष्पराज, र मोती धारण गर्दा अधिक शुभफल प्राप्त हुन्छ ।
मोती: मोती चन्द्रमाको रत्न चन्द्रमा कुण्डलीमा शुभ भावको स्वामी भएमा ब्यक्तिको लागी मोती शुभ फलदायक बन्छ । मोती धारण गर्दा कमसेकम पाँच रत्तिभन्दा धेरैको होस । साथै शुद्द पनि होस । मोती धारण गर्दा हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद कहिले पनि धारण गर्नु हुँदैन । यि रत्न मोतीको शत्रु रत्न हो । अतः साथमा लगाउँदा हानी गर्छ । यदी मोतीको मित्र रत्न माणिक्य, पुष्पराज, मुँगा लगाउँदा निश्चितै पनि शुभ फलदायी हुन्छ ।
मुँगा: मुँगा मंगलको रत्न हो । कुण्डलीमा मंगल शुभ भावको स्वामी भएमा मुँगा धारण गर्दा अनन्यादी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यदी मंगल अशुभ भावको स्वामी भएमा मुँगा कदापी धारण गर्नु हुँदैन । मुँगा धारण गर्दा सात रत्तिमाथीको लगाउँनु पर्छ । यसको साथै यसको शत्रु रत्न, हीरा, पन्ना, गोमेद, नीलम, र लहसुनिया कदापी धारण गर्नु हुदैन । यदी मुँगाको मित्र रत्न माणिक्य, मोती, पुष्पराज धारण गरेको खण्डमा जीवन पूर्ण अनुकुल बन्न सक्छ ।
पन्नाः पन्ना बुध ग्रहको रत्नको हो । यदी कसैको कुण्डलीमा शुभ भावको स्वामी बुध छ भने त्यसका लागि पन्ना शुभ फलदायी हुन्छ । पन्ना धारण गर्दा कुण्डलीमा बुध ग्रहको अंश कति छ त्यसको आधारमा रत्ति निर्धारण गर्नुपर्छ । पन्नासँग मुँगा बिलकुल धारण गर्नु हुँदैन । अरु ग्रहको स्थिति कुण्डली परिक्षण गरी अन्य रत्नको चुनाव गर्न सकिन्छ । तथापी पन्नाको मित्र रत्न नीलम, हीरा, गोमेद, लहसुनिया र माणिक्य साथमा धारण गर्दा पूर्ण अनुकुलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
पुष्पराज: पुष्पराज बृहस्पतिको रत्नको हो । यो पहेलो अर्थात गुरु बृहस्पतिलाई पितवर्ण मानिन्छ । त्यसकारण पुष्पराज पहेलो हुनु पर्दछ । जसको कुण्डलीमा बृहस्पति शुभ भावको स्वामी हुन्छ, त्यस ब्यक्तिले पुष्पराज धारण गर्दा ज्ञान, बिद्या, धन, गृहस्थ सुख र सन्तान सुख प्राप्त हुन्छ । कुण्डलीमा बृहस्पतिको अंशको आधारमा रत्ति निर्धारण गर्न सकिन्छ । शुद्दतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ज्योतिषशास्त्रअनुसार बृहस्पतिलाई गुरु ग्रह पनि मानिन्छ । साथै सबैभन्दा शुभ ग्रह मानिन्छ ।पुष्पराज शुद्द पितवर्णको धारण गर्नु अति लाभकारी मानिन्छ पुष्पराजसँगै नीलम, हीरा, गोमेद, लहसुनिया धारण गर्न हुँदैन । यी पुष्पराजको शत्रु रत्न हो ।
हीरा: हीरा शुक्र ग्रहको रत्न हो । जसको कुण्डलीमा शुक्र ग्रह शुभभावको स्वामी हुन्छ, त्यस जातकले हीरा लगाउँदा शुभ तथा अनुकुलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । हीरालाई जीवनमा भोगको कारक मानिन्छ । हीरा महंगो रत्न भएकोले यसको उप रत्न जस्तै सेतो जिरकन, सेतो पुष्पराज, ओपल धारण गर्न सकिन्छ । तर, यो रत्न धारण गर्दा मोती मुँगा, पहेलो पुष्पराज, माणिक्य धारण नगर्दा उत्तम हुन्छ । किनकी यि हीराको शत्रु रत्न हुन् । हीराको मित्र रत्न नीलम, पन्ना साथमा धारण गर्दा हीराको पनि बल बढ्ने हुनाले अत्यन्त प्रभावशाली मानिन्छ । यसले जीवनमा पूर्ण अनुकुलता प्रदान गर्दछ । कुण्डलीमा शुक्रको अंशको आधारमा रत्ति तय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नीलम: नीलम शनि ग्रहको रत्न हो । शनि उच्च भएमा रंकलाई पनि राजा बनाउँछ भन्छन । तसर्थ जसको कुण्डलीमा शनि उच्चको छ, अथवा शुभ भावको स्वामी हुन्छ, त्यस जातकलाई शनि ग्रहको प्रभावले अति सुख प्रदान गर्छ । नीलम रत्नको शुद्धीकरणमा ध्यान दिनु अति आवश्यक हुन्छ । कति रत्तिको नीलम धारण गर्ने निर्धारण कुण्डलीमा भएको शनिको अंशको आधारमा गरिन्छ । नीलम महंगो रत्न भएको हुनाले लगाउँन नसक्नेले यसको उपरत्न जस्तै निलो जरकिन, क्टैला, लाजवर्त आदी धारण गर्न सकिन्छ । तर, नीलम धारण गर्दा मोती, मुँगा, पुष्पराज, माणिक, बिलकुल, धारण नगर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने यी सबै नीलमका शत्रु रत्न हुन । नीलमका मित्र रत्नहरु हीरा, पन्ना साथै लगाउदा अनुकुलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै कुण्डलीमा राहु, केतुको शुभ अवस्था रहेमा गोमेद र लहसुनिया पनि लगाउँन सकिन्छ ।
गोमेदः गोमेद राहु ग्रहको रत्न हो । राहुलाई एक छाया ग्रहको रुप मानिन्छ । त्यसकारण राहुको आफ्नो कुनै स्वराशी हुँदैन । तथापी ज्योतिषीय ब्याख्यालाई मान्ने हो भने जब राहु कुण्डलीमा लग्न केन्द्र, त्रिकोण, तथा तृतीय षष्ठ र एकादश भावमा छ भने गोमेद लगाउँदा लाभप्रद हुन्छ । यदी कुण्डलीमा राहु द्वितीय, सप्तम, अष्टम तथा द्वादशमा छ भने गोमेद धार्मण नगर्नु नै उत्तम मानिन्छ । रत्ति कुण्डली राहुको अंशअनुसार निर्धारण गर्न सकिन्छ । गोमेद लगाउदा मुँगा, मोती, माणिक्य, पुष्पराज, रत्न नलगाउँदा राम्रो ठहरिन्छ मित्र रत्न नीलम, पन्ना, हीरा, लगाउँदा अनुकुल र लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लहसुनियाः यसलाई वैदुर्य पनि भनिन्छ । यो केतुको रत्न हो । राहु जस्तै केतु पनि एक छाया ग्रह हो । अतः जब केतु कुण्डलीको लग्न, केन्द्र, त्रिकोण, तृतीय तथा एकादश भावमा स्थित छ भने केतुको महादशामा बैदुर्य लहसुनिया धारण गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको साथ यसको शत्रु रत्न जस्तै माणिक्य मोती, मुँगा, पुष्पराज धारण गर्न हुँदैन बैदुर्यको मित्र रत्न नीलम लगाउँदा लाभप्रद हुन्छ ।
यस प्रकार माथी उल्लेखित वर्णनबाट हामीले राम्रोसँग बुझ्नु सक्छौ कि ग्रहअनुसार कुन रत्न कसको मित्र हो र कुन शत्रु हो । यस अनुसार यदि हामीले रत्न धारण गर्यौ भने ग्रहको कुपित प्रभावलाई समाप्त गरी जीवनमा इच्छित लाभ प्राप्त गर्दै जीवनलाई रत्नमय र सफल जीवन बनाउँन सक्छौ । तथापि कुण्डली परिक्षण विधान ज्योतिषीद्वारा गराई रत्न धारण गर्दा पूर्ण लाभप्रद हुन्छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि रत्न धारण गर्दा मन्त्रद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गराई धारण गर्नु पर्छ ।
के साच्चै रत्नले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ त ?
रत्न धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
कुन राशिले कुन रत्न लगाउने
कुन ग्रहको शान्तिको लागि कुन रत्न लगाउने ?
रत्नको रहस्य र महत्व
कुन ग्रहका लागि कति मुखे रुद्राक्ष धारण गर्ने ?